na-akparaghị ókè site Spotify ezinụlọ
Ọ bụkwa otu nke kasị mma atụmatụ bụrụ na-eji Spotify na-enye ohere onye ọrụ na-eme ka n'aka na-akparaghị ókè music na-ụtọ site ezinụlọ dum na nke a. The nkuzi e mepụtara iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-abụghị naanị ụtọ ma onye ọrụ na-kwenyere na ọrụ maka ndị ezinụlọ nakwa iji jide n'aka na ndị ego na adịchaghị ọrụ etoju ndị ihe na-na-awa site na ụlọ ọrụ. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma n'ire atụmatụ na-enye ohere ọrụ na-enwe ọkwa kachasị elu.
Part 1.What bụ Spotify ezinụlọ
Nkebi nke 2: Olee otú iji nweta Spotify ezinụlọ?
Download Spotify music free na TunesGo na-ege ntị na-akparaghị ókè
Part 1. Gịnị bụ Spotify ezinụlọ?
Ọ bụ a atụmatụ na e nwere agbam onya iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye 50% kwụsịrị adịchaghị na akaụntụ iji jide n'aka na ezinụlọ akaụntụ na onye ọ bụla n'ime ha-eme dị ka a adịchaghị akaụntụ na ego ọnụego. Zuru ezu atụmatụ nke atụmatụ na-kpọtụrụ aha ná ukara website nke ụlọ ọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The n'ozuzu ezinụlọ atụmatụ ana achi achi na ndị na-esonụ ndị na-agbakwunyere:
1. adịchaghị akụkọ ihe niile
The ụlọ ọrụ nke adịchaghị akaụntụ na-ụtọ site ọ bụla na ezinụlọ ọ bụla so na-eme ka n'aka na free offline music na-ege ntị na-enweghị nkwụsị nke bụla na mgbasa ozi bụla.
2. The ego ihe
Ee, na ọ bụ isi ma isi mma nke na-na Spotify ezinụlọ dị ka onye ọ bụla na akaụntụ-arụ iche iche ego na isi akaụntụ nwekwara-arụ ego nke 50% n'ozuzu. The nwa akaụntụ na nke a na-na-otu ego nke ego iji jide n'aka na usoro Ọganihu.
3. Iche n'aka ikewapụ
Onye akaụntụ mgbe ịkekọrịta ozi na enweghị ikike nke onye ọrụ na onye maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na listi ọkpụkpọ ma kwe nkwa nwekwara iche iche na ike nwalee ma nyochaa n'oge ọ bụla ọ chọrọ.
4. Ọ dịghị crabbiness
N'adịghị ka ndị ọzọ ọrụ ọ dị mfe iji jide n'aka na ihe ndekọ n'okpuru ezinụlọ atụmatụ na-music 24/7/365 dị ka ọ na mesoo dị ka iche iche na akaụntụ. Onye ọ bụla onye ọrụ n'okpuru ezinụlọ atụmatụ nwere ike ime ka n'aka na music na-egwuri n'otu oge enweghị ihe ọ bụla nkwụsị.
Part 2. Olee otú iji nweta Spotify ezinụlọ?
Usoro nke na-na Spotify ezinụlọ bụ ezigbo mfe ma ọ nwere ike na-eme site ma na-eso usoro na e kwuru n'okpuru ma ọ bụ site na ịga na tinyekwa mere na ndị ahịa ọrụ nnọchiteanya pụrụ iduzi onye ọrụ nke ọma usoro. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro na e kwuru ebe a na-soro ka ọ bụghị nanị hassle free ma na-enye ohere ndị ọrụ na nke kacha mma na-enweghị ọbụna na-akpụ akpụ anụ ọhịa na-enweghị na-aga tinyekwa. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na atụmatụ a họọrọ ọma na ọ bụrụ na e bụ ihe nke na nke a mgbe ahụ onye ọrụ na-ọkachamara ndụmọdụ nke mere na nke ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-kpebiri ozugbo o kwere omume na onye ọrụ ọkọkpọhi kacha mma n'ihi enweghị ihe ọ bụla hassle.
1. Onye ọrụ kwesịrị ka edebanye maka adịchaghị na akaụntụ site na-eme n'aka na ego ozi na-aha na Spotify dị ka ha na-achọ ya na-akpaaka ụgwọ na akaụntụ:
2. The Spotify akaụntụ bụ mgbe ahụ ka a ga-enweta na-eme ka n'aka na isi usoro-akpali. Ọ ga-emekwa n'aka na ahịa ga-esi mara isi akaụntụ peeji na-emecha na website nakwa:
3. Na n'elu nri akuku njirimara kwesịrị iji jide n'aka na mmegolite button na-enwe:
4. Na peeji na-esonụ onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị ezinụlọ atụmatụ a họrọ mere na-esonụ na peeji na-egosi enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu:
5. The onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na atụmatụ dị ka kwa oke na-ahọrọ na ebe a na onye ọrụ dịkwa mkpa ịkpachara anya dị ka na-ezighị ezi atụmatụ ga-eri onye ọrụ otu ọnwa zuru ezu na ọ bụ-ahụ kwuru na ezinụlọ atụmatụ nwere ike ịbụ naanị gbanwere ozugbo ọnwa bufere.
Ezinụlọ atụmatụ bụ maa otu nke kasị mma na-eme ka n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na onye ọrụ na-arụ ihe kasị mma amụọ na na-awa site na ụlọ ọrụ na nke a. Ọ na-na-kwuru na ọ onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ezinụlọ atụmatụ na-akwụ ụgwọ maka iji Spotify onyinye kaadị dị ka mma. Otú ọ dị ịkwụ ụgwọ na oge nke na ndenye aha na-apụghị-akwụ ụgwọ site na onyinye kaadị dị ka mgbe ahụ nke oge onye ọrụ kwesịrị ka aha na kaadị ma ọ bụ PayPal akaụntụ iji jide n'aka na ugwo bụ ihe ịga nke ọma na nnọchite nke ndị ahịa.
> Resource> Spotify> Olee na-ege ntị Spotify Unlimited site Spotify Family